ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ - တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုများ၏အရေးပါမှု (၂၀၀၅) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn
Med Clin မြီးကောင်ပေါက်။ 2005 Jun;16(2):315-26, viii.
Malamuth N ကို, Huppin M က.
ဆက်သွယ်ရေးလေ့လာရေး, ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်, Los Angeles မြို့, 3130 Hershey ခန်းမ, 405 Hilgard ရိပ်သာလမ်း, Los Angeles မြို့,, CA 90095-1538, အမေရိကန်နိုင်ငံစီးဌာန။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
ဤဆောင်းပါးသည်ဆယ်ကျော်သက်, အထူးသဖြင့်ယောက်ျားအပေါ်ညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှု၏ဆိုးကျိုးများအပေါ်အလေးပေးနှင့်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုသို့မဟုတ်မ may လိင်ပြင်းထန်တဲ့ရလဒ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်ရှိမရှိအဆုံးအဖြတ်အတွက်အရေးကြီးအဖြစ်လိင်ရန်လိုရလဒ်များအပေါ်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီ၏ဝိသေသလက္ခဏာများပေါ် concentrates ။ အနာဂတ်အလုပ်မှာတော့သူကညစ်ညမ်းထိတွေ့ယေဘုယျအားဖြင့်အန္တရာယ်သို့မဟုတ်မအဖြစ်ရှုမြင်သောအာရုံတစ်ခုအလွန်အမင်းရိုးရှင်းတဲ့မှန်ဘီလူးကိုသုံးပါဖို့မအရေးကြီးပါသည်။
ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဝိသေသလက္ခဏာများ၏အထူးသဖြင့်နက္ခတ်ပေါ် မူတည်. ညစ်ညမ်း၏သက်ရောက်မှုကွဲပြားခြားနားသောဆယ်ကျော်သက်အကြားအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုများအတွင်းသိသိသာသာကွာခြားလိမ့်မည်။ အဆိုပါသုတေသနအထူးသဖြင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများညစ်ညမ်း၏မြင့်မားမကြာခဏစားသုံးသူများမှာသောသူတို့က, လိင်အကြမ်းဖက်အကြောင်းအရာထွက်ရှာသောသူတို့သည်နှင့်အခြားအန္တရာယ်အချက်များရှိသူတို့အဘို့အလိုစေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။
Malamuth နှင့် Huppin နေဖြင့်တစ်ဦးက 2005 လေ့လာမှုလည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်ရန်၎င်း၏ကြားဆက်ဆံရေးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ သူတို့က, found သူတစ်ဦးအထီးဆယ်ကျော်သက်ကလေးကို "အန္တရာယ်အချက်များအချို့ပေါင်းစပ်ပိုင်ဆိုင်သူလိင်ရန်လိုသည်အောက်ပါညစ်ညမ်းထိတွေ့မှုဖြစ်သည်မည်မျှဖွယ်ရှိဆုံးဖြတ်သည်" အဲဒီ (စ။ 316) ။ အကြမ်းဖက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်း, Malamuth နှင့် Huppin (2005) အပေါ်တိုက်ရိုက်အာရုံစိုက် "ဒီလိုအမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုများ၏လက်ခံမှုနှင့် ပတ်သက်. သဘောထားများပြောင်းလဲမှုများအဖြစ်, ထိုကဲ့သို့သောမီဒီယာနှင့်ထိတွေ့ခံရဖို့ဒါပေမဲ့သူတို့ထိတွေ့သည့်အခါကပိုဖွယ်ရှိ, သူတို့ကထိုကဲ့သို့သောထိတွေ့မှုအားဖြင့်ပြောင်းလဲသွားခံရဖို့များပါတယ်" မသာထိုအမြင့်မားတဲ့စွန့်စားမှုဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးဖြစ်ကြကြောင်းအကြံပြု (စ။ 323-24) ။